Kupfuya tsuro kunopundutsa | Kwayedza
Kupfuya tsuro kunopundutsa
23 Sep, 2021 - 12:09 2021-09-24T09:17:33+00:00 2021-09-23T12:34:51+00:00 0 Views
NYANZVI munyaya dzekupfuya tsuro muHarare inoti yave kuvaka nzvimbo yekuuraira tsuro, nyama yacho ichizotengeswa.
Iri idanho guru munyaya dzebindauko rekupfuiwa kwemhuka idzi munyika muno.
VaGift Jambaya (46) vekuWestgate, avo vanozivikanwa nezita remadunhurirwa rekuti Mr Tsuro Production, vanoti vasvika padanho repamusoro muchirongwa chekuvaka siraha (abbattoir) yekuuraira tsuro pamusha pavo.
“Ndava nemakore akawanda ndichipfuya tsuro, izvozvi ndine tsuro dzinodarika chiuru dzenyama nedzekutengesera vamwe vanoda kudzichengeta. Saka ndaona zvakakosha kuti ndivake nzvimbo yekuuraira tsuro ichava yedzimwe shoma munyika muno.
“Kureva kuti vanhu vanouya vachitenga tsuro dzakauraiwa kare pane kutenga mhenyu vozonouraya voga,” vanodaro VaJambaya.
Vanoti kunze kwekuuraya tsuro dzavo, vachabatsirawo vanodzipfuya kuburikidza nekuvauraira nekuchengeta nyama yacho mumafiriji.
“Pano ndinochengeta mhando dzose dzetsuro ndichiwana mukana wekudzidzisa vanoda ruzivo kubvira kuvana vechikoro, vemakambani nevarimi. Ndinoshanda nemachiremba emhuka izvo zvava kuita kuti ndizive zvinodiwa netsuro kubva kumatanga adzo nezvimwe zvakawanda,” vanodaro VaJambaya.
Murimi uyu anoti ane mhando dzetsuro dzinodarika gumi dzinosanganisa Chinchilla white neblack, New Zealand white neblack, European, Netherlands Dwarf, Holland Lop, Mini Lop, Flemish Giant, California neAngora.
Vanopa yambiro yechikafu chetsuro, hutsanana hunodiwa pakudzipfuya nezvirwere zvinodzibata.
“Tsuro dzinoda mapellets nehuswa. Hongu, vamwe vanodzipa muriwo nezvimwe asi hatikurudziri izvozvo,” vanodaro VaJambaya.
Vanoti hapana chinoraswa patsuro kubva kumanyowa ayo anoiswa muzvirimwa.
“Weti yacho inoitwawo manyowa, nyama yacho inodiwa zvikuru pasi rose, matehwe nemvere zvinogadzira nguwani nemabhegi uyewo mibato yemakiyi nezvimwe.”
VaJambaya vanoti varimi vetsuro vari pasi pesangano reMr Tsuro Production vanodarika zviuru zvitatu avo vanoenda kwavari vachinopangana mazano.
“Tsuro inyama inofarirwa zvakanyanya nevanhu, pano ndinotengesa 30 pasvondo. Dambudziko redu guru nderemakonzo anodya vana vetsuro saka makonzo haadiwe padyo nepanogara chipfuyo ichi,” vanodaro.
Kunze kwekupfuya tsuro, VaJambaya vanorima muriwo nezvimwe zvakasiyana.